IXESHA LE-HEIST LEMALI 5 | UMHLA WOKUKHUTSHWA KWENETFLIX, ISAMENTE, ITREYILA KUNYE NEENDABA- IRADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Ixesha le-Heist yeMali ye-5 umhla wokukhutshwa: I-Cast, itreyila kunye nabonakalisi becebo kuthotho lweNetflix
Sekuyiminyaka engaphezu kwemibini ukusukela oko abasebenzi bakaNjingalwazi kunye neempawu zabo zodumo ze-Dali baqala ukungena kwiBhanki yaseSpain, kodwa ekugqibeleni siyazi ukuba siza kuyifumana nini-kwaye ukuba-bayayenza iphile.
Imali yeNetflix yeNetflix, ekwabizwa ngokuba yiLa Casa de Papel, ngoku inomhla wokukhutshwa ngokusesikweni - okanye kufanele ukuba ibe yimihla yokukhutshwa, njengoko ixesha lesihlanu nelokugqibela liza kwahlulwa libe yimithamo emibini.
Kube kukulinda ixesha elide kwisiqendu se-10 se-bumper, kunye nexesha lesine eliqalise ngaphezulu konyaka ophelileyo kwaye liphele kwi-cliffhanger kunye ne-master-mind ethile yolwaphulo-mthetho ebonakala ngathi ifunyenwe.
Nangona kunjalo, kubonakala ngathi isiphelo somboniso siya kulungela ukulinda - umyili u-Alex Pina uthe ukuba imfazwe ifikelela kumanqanaba ayo agqithisileyo kwaye abukhali, kodwa ikwa lelona xesha libalaseleyo nelinomdla.
Akusiyo uphawu oluhle kwiTokyo, iDenver kunye nolunye ulwaphulo-mthetho olusindayo, kodwa iindaba ezilungileyo kubalandeli abaza kuhanjiswa isiphelo esivuyisayo kwimeko yenkcubeko engalindelekanga.
INetflix ikwatyhile ukubonakala kwemifanekiso yokuqala yonyaka wokugqibela olindelweyo onokubonakala apha ngezantsi. Imifanekiso ibonisa imeko yesiphithiphithi ngaphakathi nangaphandle kweBhanki yaseSpain. Babonisa ukuba uNjingalwazi ubambe ongezantsi emva kokuba iSierra ifumene indawo azifihle kuyo, kunye neLisbon ngaphakathi kwibhanki yeTV eyaziwayo.
Ixesha lokugqibela liza kubona imfazwe iqala kwaye iGangqa kufuneka lilwe ukuze lisinde kwiintshaba zalo- kwaye emva kweeyure ezili-100 ebhankini kunye nabachasi abanyukayo, isiphelo seyona heist inkulu embalini iyeza.
Ke zip zip jumpsuit yakho ebomvu kwaye unike imaski yakho yeSalvador Dali kwakhona - nantsi yonke into esiyaziyo malunga neMali Heist yexesha lesihlanu.
Isizini yeMali Heist iinyani ezintlanu ezikhawulezayo:
Amaxesha onyaka: 5 iyonke. Ukuza kuthi ga ngoku, ixesha lesihlanu liqinisekisiwe.
Iziqendu: Iziqendu ezisi-8 ngexesha ngalinye, iziqendu ezili-10 ngexesha lesihlanu.
Umhla wokukhupha: I-3 kaSeptemba 2021 yeCandelo 5 uMqulu 1; I-3 kaDisemba ngo-2021 yenxalenye yesi-5 uMqulu 2.
Isizini yeMali Heist umhla wokukhutshwa kwesihlanu: Iza nini kwiNetflix?
IQINISEKILE: Inxalenye ye-Heist yeMali: Umthamo uza kufika kwiNetflix nge Ngomhla wesi-3 kuSeptemba 2021 .
Oku kuya kulandelwa emva kweenyanga ezintathu yiCandelo 5: Umqulu 2, oqala ukusebenza ngomhla Ngomhla wesi-3 kuDisemba 2021 .
I-La Casa de Papel / iMali Heist ekugqibeleni iyabuya!
Icandelo 5: IVolumu 1 iqala ngoSeptemba 3
Isiqendu 5: Umqulu 2 wokuqala we-3 kaDisemba pic.twitter.com/kHQfVhw84F
-Netflix (@netflix) Ngomhla we-24 kuMeyi 2021
Ixesha le-Heist lemali kusenokwenzeka ukuba lithathe ixesha lalo ukukhanyiselwa ngombala oluhlaza, kodwa ngaba wakha wayithandabuza loo nto? Olu luhlu luhleli kwi-10 ephezulu kwi-Netflix kwiveki yexesha lalo lokukhululwa kunyaka ophelileyo, ukwala ukuvela. Ngelixa ngamanye amaxesha iNetflix inokunquma uthotho olufutshane, ishiye abalandeli ngamabali angagqitywanga, ngeli xesha lokugqibela sifumana ingxelo esongwayo!
Imali Heist isizini 5 itreyila: Singayilindela nini inqwelwana erhuqwayo?
I-teaser emfutshane yakhutshwa ngoMeyi 2021 ibhengeza umhla wokukhutshwa. Ngokuqinisekileyo ibonakala ngathi iyadubula.
Lindela i-trailer epheleleyo kwiiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba umboniso uqalise-ngoJulayi okanye ngo-Agasti 2021.
Imali Heist isizini 5 cast: Ngubani obuyayo kwaye ngubani omtsha?
Uhlobo oluguquguqukayo lweMali Heist luthetha ukuba akukho mlinganiswa ukhuselekileyo, kodwa bekukho abambalwa ababemi ekupheleni kwexesha lesine. INetflix ityhile ukuba ngubani oza kubuya kwisizini yesihlanu- kwaye kukho ubuso obutsha obuzimanya neqela, noMiguel Ángel Silvestre (Sense 8) noPatrick Criado baqinisekisiwe njengamalungu amatsha eNetflix.
Uluhlu olupheleleyo lweempawu ezibuyayo kunye ne-cast is; U-ularsula Corberó (Tokyo), vlvaro Morte (uNjingalwazi), Itziar Ituño (Lisbon), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspector Sierra), José Manuel Poga (Gandía), noPedro Alonso IBerlin).
Umbonisi u-Alex Pina ubanga ukuba amandla-oko-ngenene ayefuna ukuba abulale iBerlin. Ukuthetha no Ixesha leHindustan , uthe: Bendingazimiselanga kumkhupha kolu ngcelele. Omnye umntu wathi kum, ‘Lo mlinganiswa akahambelani namaxesha. Kuya kufuneka umkhuphe kolu thotho. '
Ewe, wahlala, into uPina avuya kakhulu ngayo: [Ungumntu ongathandani nomntu ongathandani nomntu ongamaziyo, narcissist kunye ne-psychopath ngeendlela ezininzi… Kodwa sinokuba nomlinganiswa onje kolu thotho kwaye abaphulaphuli banokuzikhethela ngokukhululekileyo ukuba bakweliphi icala , kunene?
Ecaleni kwe-cast, kukho abathathu abalawuli abaqinisekisiweyo bexesha lesihlanu; UJesús Colmenar, uKoldo Serra kunye no-Rodlex Rodrigo.
Isicwangciso semali se-Heist sexesha lesi-5: Kuza kwenzeka ntoni?
Ixesha lesihlanu leMali Heist liza kuthatha kuyo lonto I-cliffhanger, enezinto ezimbalwa zelenqe zokusombulula xa umboniso ubuya.
Ngaphambili kwi-Money Heist, iqela lahlasela iRoyal Mint yaseSpain (icandelo lokuqala nelesibini), ngelixa iinxalenye ezintathu nezine zajikeleza kwilinge lemigulukudu yokunyibilikisa yonke igolide ngaphakathi kweBhanki yaseSpain bayithabathele yona.
Ukuphinda wenze into ekhawulezileyo: ixesha lesine lavulwa ngesimbo esimangalisayo nelungu elinye leqela lemigulukudu, eNairobi (Alba Flores), elwela ubomi bakhe ngaphakathi ebhankini, ngelixa uNjingalwazi wayebaleka, esokola ukumelana nengcinga yokuba uthando yobomi bakhe, owayesakuba lipolisa uLisbon, wayebulewe ngamapolisa.
Kubonakala ngathi le genge yayikwimeko engenakwenzeka, kodwa kunjalo uNjingalwazi uhlala enesicwangciso. Kwaye ixesha lonyaka, njengabalandeli abasele bebukele yonke into baya kuyazi, baqukumbela ngesitayile esimangalisayo, kodwa banamashishini amaninzi angagqitywanga.
Kulapho sishiye wonke umntu ekupheleni kwexesha lesine leMali Heist:
ITokyo (Ursula Corbero), umfazi oshushu ovuthayo ungaphakathi ebhankini kunye nalo lonke iqela lemigulukudu.
UNjingalwazi (U-vlvaro Morte), wakhupha ukukhutshwa okumangalisayo kweLisbon, kodwa wafumana undwendwe olungalindelekanga kwimizuzu yokugqibela yexesha lesine.
ILisbon (Itziar Ituno), ukhululekile ejele, emva kwesicwangciso sobuchule sikaNjingalwazi sokumkhulula asebenze, kodwa ngoku ungaphakathi ebhankini.
UAlicia sierra (Najwa Nimri), ipolisa elihlazileyo ngoku likwiphulo labasetyhini linye lokuthatha phantsi i-nemesis yakhe uNjingalwazi. Wabeka ikona uNjingalwazi eshiya abasebenzi kungekho ndlela yakubaleka…
Okokugqibela, kukho iqanda lePasika esaphathwa ngalo. Ukuba ubuzijongile iikhredithi ngewube uwuvile umhobe wokuchasana 'Bella Ciao' udlala. Ingoma idlala kwimixholo emininzi yoluhlu, kodwa eli xesha libambe ngakumbi njengoko umdlali weqonga uNajwa Nimri ecula ikhava. Ngaphambi koko, abo balwa noBerlin noSergio banokuvakala becula. Ngaba uAlicia uza kujoyina iqela? Asiqinisekanga ngeli nqanaba, kodwa sinokongeza ukuba uNimri ukwathi umgca wokugqibela wencoko phambi kweekhredithi nazo.
Abalandeli baye babelana ngethiyori zabo. Enye into yokuba u-Alicia ngenene nguTatiana, umfazi waseBerlin ovela kwimimangaliso. Oku akubonakali ngathi kuthi, ngelixa benokufana, uTatiana udlalwa nguDiana Gomez hayi uNimri. Asiyi kuluyeka ngokupheleleyo unxibelelwano nangona kunjalo.
Ngelixa i-cast inganikeli kakhulu xa kuziwa kwinto eyenzekayo emva koko, u-ularsula Corberó, odlala iTokio, wathetha naye Isazisi Mag malunga naye nolwalamano lwaseRio.
Kudala ndizibuza ukuba ingaba obu budlelwane bunetyhefu na. Ngenxa yokuba sesichengeni kweRio kunye noTokio ngokumkhusela kakhulu, sinokubona oko kwasekuqaleni. Kodwa mhlawumbi inetyhefu kancinci ngenxa yobuntu bukaTokio.
Ngekamva labo… Ndiyayazi ukuba izokuhamba njani isuka apha… Indlela endibona ngayo kukuba kufana namaqela amabini - kwaye oku sikubona ngokucacileyo kwimidiya yoluntu. Abanye abantu bafuna ukuba iTokio kunye neRio baphinde bahlangane kwaye baphinde babuye kunye kwaye abanye bachasene kakhulu nolwalamano kwaye abafuni ukuba baphinde babe kunye kwakhona.
UPina utyhile amanqaku athile aphambili kudliwanondlebe naye LEYA naye. Sisuka kumdlalo wechess- isicwangciso sobukrelekrele- ukuya kwisicwangciso semfazwe: uhlaselo kunye nembambano, utshilo. Sisoloko sizama ukuba abachasi bethu babe nesisa, bakrelekrele, babenyezele. Kule meko, kuhlobo lomlo wefilimu emsulwa, sikwajonga abalinganiswa abanobukrelekrele obunokulinganisa noNjingalwazi.
Wongeze wathi: IAdrenaline ingaphakathi kwiDNA yeMali Heist. Yonke imizuzwana engamashumi amathathu izinto zenzeka kwaye ziphazamise abalinganiswa, ukujika kwesikere ukuya kwinto. I-adrenaline exutywe neemvakalelo ezivela kubalinganiswa abantsokothileyo, abalinganiswa nabangabonakaliyo iya kuqhubeka kude kube sekupheleni kwe-heist kwiBhanki yaseSpain.
Nangona kunjalo, imigulukudu ngoku iya kutyhalelwa kwiimeko ezingenakuphinda zibekho, ukuya kwimfazwe yasendle: lelona candelo libalaseleyo kuwo onke amalungu esiwadubulileyo.
Sisenzo kunye nemvakalelo, ngumdlalo omnyama kunye nomdlalo weqonga, ezothando kunye neepathos.
Isizini yokugqibela yeHist Heist kunye nokuphuma
Isizini yesihlanu seMali Heist kukuphuma okokugqibela komboniso, kodwa uPina uxelele Imagazini yeOprah ukuba unemibono yokuphuma.
Sinezinto ezininzi ezinokubakho kwezinye i-spinoffs, ewe, kwaye ndicinga ukuba enkosi kwizazisi ezomeleleyo nezinamandla zabalinganiswa.
Besisoloko sijonga abalinganiswa ukuba babe noyilo oluntsonkothileyo, nolweleko. Ke ndicinga ukuba phantse lonke uphawu lweMali Heist ine-duality esingathanda ukuyibona kwi-spinoff. Singazibukela naziphi na ezinye iimeko.
Ndicinga ukuba uArturito unokuba nomdlalo omnyama. Ityala laseBerlin lokuzibonakalisa kwakhe licace gca - ungumntu ongaziphathi kakuhle, ugqirha wengqondo, umntu oziphethe kakubi, umntu okreqayo, isidlwengu… kodwa nangoku baninzi abantu abamthandayo, kuba uyabuxabisa ubuhlobo, ukunyaniseka okanye ubuzalwana.
Ukusuka eNairobi ukuya e-El Profesor… iDenver ngomnye umlinganiswa onomtsalane. Ndingathanda ukuzibhala zonke njengezipinatshi!
Sithanda isandi sabo bonke!
Imali Heist cast bathumela okuhle kwabo
Ngexesha leMali Heist isisihlanu ukuba lixesha lokugqibela abadlali sele beqalisile ukuvalelisa kwimithombo yeendaba. UPedro Alonso, odlala iBerlin, unike imbeko kumlingiswa wakhe kwi-Instagram. Inguqulelo evulekileyo yesithuba sakhe ilandelayo:
Ndenze umzobo ithutyana ngaphambi kokudubula ngokulandelelana. Ndiyithumele kumphathi wam. Uphendule wathi 'kuyothusa kancinci' kwaye futhi 'kodwa ndiyazithanda izilwanyana.'
Kuyahlekisa, emva koko xa ndadubula imifanekiso yam ngokulandelelana, umntakwethu omncinci wandixelela 'ngoku ewe, ngoku ndiyabona ukuba kukho into ephazamisayo emehlweni akho'.
Iyahlakesi. Kum yayi malunga nothando. Kwaye mhlawumbi ngumyalezo ongaqhelekanga wexesha elizayo, xa iya kuba lixesha lokuhlola inxeba. Phantse umlinganiswa, kodwa umdlali. Ndiyazi ukuba ingavakala ingaqhelekanga.
Kungekudala okanye kamva loo mzuzu uyeza. Ihlala isiza. Lowo xa ilixesha lokuba uye esiphelweni sento esingayaziyo. Okanye asifuni ukwazi.
Kwaye ngokoluvo lwam ayonto imbi. Nangona isenza umbono. Njengothando lokwenene kunye nobomi uqobo. Kuyothusa ngamanye amaxesha, kodwa ngokuqinisekileyo intle kakhulu.
Kube luhambo olungaqhelekanga @alvaromorte Enye yezo kufanelekile ukuba zigcinwe kwisifuba sobutyebi emva kwe-odyssey.
Iposi ekwabelwana ngalo nguPedro Alonso (@pedroalonsoochoro)
UPedro yayingenguye yedwa othi ndlela-ntle, Itziar Ituño nayo yathumela nge-Instagram : Ngoku ewe! ULALELE, Umhloli uRaquel Murillo, isela laseLisbon !! Olunjani uhambo !!
UMiguel Herrán naye wabelane nge-Instagram : Rio… Kube luhambo olumangalisayo nawe. Namhlanje sivale iqonga kunye. Kwaye ndinokuxelela izinto ezimbini kuphela. ENKOSI NDIYAKUTHANDA!
Ekugqibeleni, UNjingalwazi uthumele ividiyo Ndivalelisa kwakhona: Ukushiya okokugqibela iseti ye @lacasadepapel Amagama ayimfuneko.
Enkosi kakhulu, ngayo yonke into. Kubalandeli (eyokuqala, ewe), kulo lonke iqela le @vancouvermediaproducciones kunye @netflixes @netflix Kwaye nakuwe, Professor wam othandekayo. Ndiyakukhumbula ukuba nexesha elimnandi nawe. ENKOSI.
Ixesha le-Heist lemali ukuya kwisine ngoku ziyafumaneka kwiNetflix.
Ufuna enye into ukuba ubukele? Jonga isikhokelo sethu kwi Olona luhlu lubalaseleyo kwiNetflix kwaye Iimuvi ezilungileyo kwiNetflix , okanye undwendwele isiKhokelo sethu seTV.
zingaphi iziqendu kwi boruto
zingaphi iimuvi zehalo ezikhoyo
isizini yesi-3 yomdyarho we-rupaul
phi ukubukela inkosi
uJames Bond radio